ထမင်းအိုး: ကျွန်မသိသော အသီး အရွက် အစေ့ အမွှေး အကြိုင်များ
ကျွန်မဒီရောက်ခါစက အသီးရွက် အသားငါး အခေါ်အဝေါ်တွေကို ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိဘူး။ အဲ........မမလုရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုတွေ့မှ တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားတယ်။ မဟုတ်ရင် အဘိဓာန်စာအုပ်ထဲဟိုလှန်ရှာ ဒီလှန်ရှာ နဲ့လုပ်ရပါသည်။ အခု ကျွန်မသိသော အသီး အရွက် အစေ့ အမွှေး အကြိုင်များ ကို ပုံနှင့်တကွ ရေးလိုက်ပါတယ်နော်။ နောက်ထပ်သိခဲ့ရင် နောက်ဆက်တွဲလဲ ထပ်ရေးပါအုံးမည်။ အမှားပါရင်လဲ ပြောပေးပါအုံး။
မမလုရဲ့ ပင်လယ်စာ အခေါ်အဝေါ် ၁
မမလုရဲ့ ပင်လယ်စာ အခေါ်အဝေါ် ၂
မမလုရဲ့ အခေါ်အဝေါ် ၃
မမလုရဲ့ အခေါ်အဝေါ် ၄
ကရဝေးရွက် (bay leaf)
သံပရာရွက် (lime leaf)
ဆနွင်း (Indian Saffron or tumeric)
ပဒဲကော (galingale or galangal)
ပူစီနံ (mint leaves)
စပါးလင် (lemon grass)
ဖက်ဖယ်ရွက် (Laksa leaves or polygonum leaves)
ပြင်းတော်သိမ်ရွက် (curry leaf)
နံနံစေ့ (coriander seed)
ကြက်သွန်မြိတ် (onion spring)
ကျူဆိုင် (chinese chives, Kui Chai)
ပင်စိမ်းရွက် (basil leaves)
ရှမ်းနံနံ (culantro or saw leaf herb)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 12:37 PM
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ စုံနေတာပဲ။ ဒီလိုလေးစာရင်းပြုစုထားရင် နောက်လိုရင်ရှာရ လွယ်တာပေါ့နော် ... ဆက်ရေးပါ ... အားပေးနေပါတယ်။
သီးစုံကုလားဟင်းထဲ ပြင်းတော်သိမ်ရွက်လေး ထည့်တာလည်း ကောင်းတာပဲ။ ဒီမှာလည်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တော်တော်သုံးကြတယ်။ စုံနေတာပဲ။
မိုးကောင်းသူရေ ဟင်းခတ်အဆာပလာတွေထဲမှာလေ တရုတ်မဆလာဆိုတာ ဘာလဲဟင်..အဲ့တာ ခဏခဏတွေ့ပြီး မသိလို့. ပြောပြနော်
ရှမ်းနံနံ၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ဖတ်ဖယ်ရွက် တွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ သိလိုက်ရတော့ ဝမ်းသာသွားတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာ ငါးဟင်းပေါင်းရင် အဲဒါတွေ ထည့်တယ်လေ။ အသေအချာလည်း မမှတ်မိတော့ ဘယ်လို ဝယ်ရမလဲ မသိ ဖြစ်နေတာ။
အယ် အစုံပဲတော့။ မြင်တာနဲ့ကို ဟင်းချက်ချင်လာပြီ။
တကယ့်ကို စုံစီနဖာပါပဲ မိုးကောင်းသူရယ်...
ပင်စိမ်းရွက် (basil leaves)မမြင်ဘူးဘူး ဆိုင်မှာ.
မမ ညီမလေး နံနံပင်မျိုးစေ့တွေ တွေ့လို့ ၀ယ်လာတာ ..အဲဒါလေ သူငယ်ချင်းတယောက်က လှော်ထားwmတဲ့ ညီမလေးက မလှော်ရသေးဖူးလို့ငြင်းပီး ငါ စိုက်ထားပြမယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတာ..( လုပ်ပါဦးမမ လှော်ပီးသားနဲ့ မလှော်ရသေးတာနဲ့ ဘယ်လိုခွဲရလဲ မမ ကူညီပါနော် :)